Gar-gaarka ay wadaan ciidanka booliska gaarka ah. - Cakaara News
Gar-gaarka ay wadaan ciidanka booliska gaarka ah.
Shiniile(CN), isniin, November,30, 2015, Ciidanka booliska gaarka ah ee DDSI ayaa ka sii wada degmooyinka gobolka siti gar-gaarkii ay ku caawinayeen bulshada ay abaarta cimilada isbadashay keentay saamaysay . Abaartan oo ayna wax ka qabad-keeda u kala hadhin xukuumada DDSI, ta heer fadaraal iyo ciidanka booliska gaarka ah ee DDSI.
Haddaba waftigii saraakiisha ahaa ee uu hogaaminayay taliyaha guud ee ciidanka booliska gaarka ah ee DDSI mudane Janaraal Cabdiraxmaan Cabdilaahi buraale ayaa gaadhsiiyay raashin kii caawimada ahaa degmada shiniile oo Gobolka Siti. gaar ahaan santarka fadhato iyaga oo horena ugu soo qaybiyay raashinka caawinta ah qaarka mid ah santarada hoos yimaada degmada hadhagaale.
Haddaba taliyaha guud ee ciidanka gaarka mudane janaraal Cabdirahmaan cabdilaahi buraale oo la hadlayay warbaahinta deegaanka ayaa ka warbixiyay sida ay ku keeneen deeqan isaga oo tilmaamay in uu yahay raashin iskugu jiro bariis iyo sonkor. kaasi oo ka timiday ciidanka booliska gaarka ah oo ka soo jaray mushaarkooda si ay uga qayb-qaataan caawinta shacabkooda ay abaaru saamaysay.
Waxaa kale oo uu taliyaha guud ee cidanka gaar ah ee DDSI u sheegay warbaahinta in ayna caawintani ahayn markii ugu horaysay ee ay ciidanka booliska gaarka ee DDSI ka qayb qaataan gar-gaarka ay shacabka u fidinayaan ee ay markasta ka qayb qaataan haddii ay tahay gaadhsiinta dawooyinka shacabka iyo raashinkaba isaga oo tilmaamay in ay sii wadayaan wax u qabadka shacabka martasta maadaamo oo ay yihiin kabihii shacab.
Dhankooda bulshadii ay ciidanku gaadhsiiyeen deeqda raashin ah ee ku dhaqan santarka fadhato ayaa si balaadhan u soo dhaweeyay deeqdan uga timiday ciidankooda waxaya sheegeen in ay siwayn ugu farax san yihiin soono gaadhsiiyeen deeqdan xili ay shacabkani si wayn ugu baahan yihiin deeqtan.